Imithwalo yokuTshintsha kwemithwalo (i-LBS) Abavelisi kunye nabanikezeli-baTshintshiselwano lweTshintsho loThutho lweChina (LBS)
I-FZW32-24 Series yangaphandle iVoltage ePhakamileyo yokuQinisa iSithuba sokuThintela ukuTshintsha
1. Inkcazo yeFZW32-24 yohlobo lwangaphandle lwamandla ombane odwa wokutshintsha umthwalo wokupakisha luhlobo olutsha lokutshintsha umthwalo kukudityaniswa kwamava aqolileyo otshintsho lwasekhaya olukhoyo kunye noyilo lobuchwephesha lwangaphandle. Olu tshintsho lwekhefu lomthwalo lwenziwe ngesixhobo sokuqhawula izixhobo, isiphazamisi sokusebenza kunye nokusebenza kunye nezinye iindawo. Ngokusebenzisa umgaqo wesiphazamisi esincamathelayo, esinamandla okubamba arcing, ukusebenza okuthembekileyo, ubomi benkonzo ende, umthamo omncinci, akukho bungozi bokudubula, ...
I-FZW32-40.5 (RD) Uthotho lwangaphandle lweVoltage ephezulu yokuLayishwa kweSixhobo sokuTshintsha
I-FZW32-40.5 yangaphandle i-AC ephezulu yokuqhawula umthwalo wokuqhawula umthwalo wokuvula imveliso yinto entsha eyamkelekileyo yokufumana ulwakhiwo lwamava okuqhekeza amava kunye nemveliso yetekhnoloji ephambili phesheya yoyilo kunye ne-irefo yomntu. iswitshi yokuqhekeza umthwalo yenziwe ngencakuba yokuqhawula, isiphazamisi sokucoca kunye nendlela yokusebenza. Ukucima i-arc yokucima umlilo, kukho ukufaneleka njengamandla okucima i-arc amandla, ukusebenza okuthembekileyo, ixesha elide lokuphila, umthamo omncinci, akukho ngozi idubulayo kwaye akukho kungcoliseka kwendalo.
I-PGS Series yangaphandle ephezulu yeVolthi SF6 yokuTshintsha ukuTshintsha ukutshintsha
I-PGS-630A ipali yokukhwela umthwalo wokucoca umthwalo isetyenziselwa ukwaphula umbane we-12/24 / 40.5kV, ulinganise i-630A yangoku, 50 / 60Hz inkqubo yokuhambisa umbane, ukuvala umthwalo wangoku nangaphezulu komthwalo wangoku wenkqubo yamandla, inokwahlula ngokuzenzekelayo ukulandelela amacandelo ulwabiwo lwamandla ezithi zenzeke iimpazamo. Iswitshi sihambelana nomlawuli we-elektroniki onobuchwephesha bamuva. Iswitshi sinezandla, iimoto, iindlela zokusebenza ezikude. Isilawuli se-elektroniki siza kufakwa ngaphakathi kweetaines ...
I-FZW32-12 Series yangaphandle i-Voltage ephezulu yokuCima ukuPhuma kokuTshintsha ukuTshintsha
1. Ulwandlalo FZW32-12 uhlobo ngaphandle ombane aphezulu uqhawuko vacuum umthwalo iswitshi uhlobo olutsha lomthwalo switch leyo kukudityaniswa kwamava aqolileyo kwitshintshi yemithwalo ekhoyo yasekhaya kunye noyilo lobuchwephesha lwangaphandle. Olu tshintsho lwekhefu lomthwalo lwenziwe ngesixhobo sokuqhawula izixhobo, isiphazamisi sokusebenza kunye nokusebenza kunye nezinye iindawo. Ngokusebenzisa umgaqo wesiphazamisi esincamathelayo, esinamandla okubamba arcing, ukusebenza okuthembekileyo, ubomi benkonzo ende, umthamo omncinci, akukho dange lokuqhushumba ...
I-FZRN21-40.5 I-Voltage yangaphakathi yokuPhuma kweMithwalo yokuTshintsha umoya
Iimeko zokusingqongileyo 1. Ukuphakama: 1000m; 2.ubushushu obugcweleyo: -40 ~ + 40 ℃; 3. Ukufuma okunxulumene: umyinge wemihla ngemihla ngama-95%, umyinge we-90% ngenyanga; 4. Ubunzulu benyikima: 8 isidanga; 5. Ungcoliseko kwibakala: II isidanga. Iparamitha zobugcisa NO. Ixabiso leyunithi yexabiso 1 Umyinge wevolthi kV 40.5 2 Ukulinganiselwa kwamaxesha Hz 50 3 Ubuninzi obulinganisiweyo ngoku be-fuse A 63 4 1min amandla amaza ombane ombane kV 95/110 5 Umbane ophembelela ukumelana namandla ombane kV 185/215 6 Ukuphakama okulinganiselweyo kukumelana ne-kA yangoku 50-7 .. .
I-FZN25-12 Uthotho lwangaphakathi lweVoltage ephezulu yokuThintela ukuTshintsha ukutshintsha
FZN25-12 ngaphakathi HV vacuum load break break switch a 3-phase AC 50Hz 12kV indoor switch equipment .. ♦ Mechanicaling: indlela yokusebenza yasentwasahlobo, uhlobo lwencwadi kunye nohlobo lombane olukhoyo; ♦ Uhlobo lokusebenza: indawo yokusebenza yasekunene kwindawo esekhohlo; Isalathiso sokusebenza: ukusebenza ngasekhohlo, ukusebenza ekunene; ♦ Isicelo: iswitshiar yangaphakathi ye-12kv. Iimeko zokusiNgqongileyo temperature Ubushushu bendalo: -25 ° C 〜 + 40 ° C; Itude Ukuphakama: <1000m (ngaphezulu komphakamo wolwandle); Hum ukufuma Relative: avareji ngemihla <95%, av ngenyanga ...
I-FN12-12 Uthotho lwangaphakathi lweVoltage yomoya yokuTshintsha ukuTshintsha
I-FN12-12 yangaphakathi ye-HV yokulayisha umthwalo womoya yisigaba esithathu se-AC 50Hz 12kV izixhobo zokutshintsha ngaphakathi. ♦ Ukufakwa kwendlela: ngaphambili-inyuswe, kwicala elinyusiweyo, kufakwe iflip; ♦ Indlela yokusebenza: indlela yokusebenza yasentwasahlobo, uhlobo lwencwadi kunye nohlobo lombane olukhoyo; Uhlobo lomsebenzi: Umsebenzi wasekunene kunye nokusebenza ngasekhohlo; ♦ Isicelo: iswitshiar yangaphakathi ye-12kv. Iimeko zokusiNgqongileyo temperature Ubushushu bendalo: -25 ° C 〜 + 40 ° C; Itude Ukuphakama: <1000m (ngaphezulu komphakamo wolwandle); Hum ukufuma Relative: avareji ngemihla <95%, monthl ...
I-FN7-12 Uthotho lwangaphakathi lweVoltage ePhakamileyo yokuTshintsha kweSixhobo sokuTshintsha
I-FN7-12 luhlobo olutsha lomoya ongaphakathi ngaphakathi ombane ophezulu wokutshintsha umthwalo. Ilungele i-AC 50Hz, i-voltage ye-12kV yamanqanaba amathathu enkqubo yamandla e-AC, njengokuphula umthwalo ngoku kunye nokuvala okwangoku. Uhlobo lweenkcazo zeemeko ezisebenzayo ● Ubushushu obushushu: -25 ° C ~ 40 ° C; ● Ukuphakama: <1000m; ● Ukufuma okunxulumene: umndilili wemihla ngemihla <95%; Umndilili wenyanga <90%; ● Akuyi kubakho zinto zonakalisayo, ezinokutsha nezokuqhushumba okanye umphunga kwisiza; ● Akukho kungcangcazela rhoqo kobundlobongela. Iteknoloji ...
FN5-12 Uthotho lwangaphakathi oluPhezulu loMthwalo woTshintsho lweSixhobo esiTshintshayo
Uhlobo lwe-FN5-12 yangaphakathi ye-AC ephezulu yokulayisha umthwalo we-brek switch (emva koku ukubizwa ngokuba ngumthwalo wokuvula umthwalo) ii-apile kwinethiwekhi ye-AC 50Hz 12kV, yokuphula umthwalo ngoku kunye nokuvala isekethe emfutshane yangoku. Ikhefu lokulayisha lokutshintsha kunye nefuse linokunqumla isiphaluka esifutshane sokukhusela. Iswitshi yokuqhekeza umthwalo ingasetyenziswa nohlobo lwe-CS6-1 yendlela yokusebenza yesandla, kwaye le mveliso ikhethekileyo isebenzisa indlela yokusebenza ye-CS yokusebenza. Isicelo se-FN5-12 yohlobo lwangaphakathi lwe-AC ephezulu yokulayisha umthwalo wokuvula (emva koku ...